कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिले प्लाज्मा दान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिले प्लाज्मा दान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
स्वास्थ्यखबर मंगलबार, वैशाख २१, २०७८, ०६:०५:००
कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर भएका बिरामीलाई कोरोना निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा दिने गरिन्छ। यसरी प्लाज्मा थेरापी विधिबाट गरिएको उपचारबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका संक्रमितहरु निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको थियो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अध्ययनले पनि नेपालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट गरिएको उपचार विधि प्रभावकारी भएको समेत पाइएको थियो।
चिकित्सक तथा समाजसेवीहरुले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्लाज्मा थेरापी विधि उपयोगी भएकाले प्लाज्मा दान अभियान नै चलाएका थिए।
पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणदेखि हालसम्म पनि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमतिको उपचार भइरहेको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आयात भएपछि २१ लाख भन्दा बढि व्यक्तिले खोप लगाइसकेका छन्। यस्तै पहिलो प्राथमिकतामा परेका करिब ५ लाख व्यक्तिहरुले खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका छन्।
अहिले धेरै व्यक्तिहरुमा खोप लगाएपछि प्लाज्मा दान गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको पाइएको छ।
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिले प्लाज्मा दिन मिल्छ वा मिल्दैन? यो प्रश्न हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन विशेषज्ञ डा विपिन नेपाललाई सोधेका छौं।
डा नेपालको उत्तर जस्ताको तस्तै
प्लाज्मा दान गर्न एकपटक संक्रमण भइसकेको व्यक्ति हुनैपर्छ। कोरोना संक्रमण नभइ कोरोना विरुद्धको खोप मात्र लगाएर उत्पादन भएको एन्टिबडीले मात्र हुँदैन।
तर कोरोना संक्रमण भएर निको भएको र भ्याक्सिनको एउटा वा दुवै डोज लगाएका व्यक्तिले भने प्लाज्मा दान गर्न सक्छन्। तर, यसरी प्लाज्मा दान गर्न भने कोरोना संक्रमण भएको ६ महिना नाघेको हुनु हुदैन ।
कोरोना संक्रमण भएर भ्याक्सिन नलाएका व्यक्तिहरुको हकमा भने कोरोना संक्रमण भएको तीन महिनासम्ममा मात्र प्लाज्मा दिन मिल्छ ।
भ्याक्सिनले बनाउने एन्टिबडी भनेको स्थायी प्रोटिनको विरुद्धमा मात्र हुन्छ। त्यसैले भ्याक्सिन मात्र लगाएका तर कोरोना संक्रमण नभएका व्यक्तिको प्लाज्मा कोरोना संक्रमण भएर गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीका लागि उपयोगी हुन सक्दैन।
तर, एकपटक कोरोना संक्रमण भएर शरीरमा एन्टिबडी बनेको छ भने त्यो न्युक्लियोक्याप्सिड एन्टिबडी बनेको हुन्छ। त्यो संक्रमणले बनेको हुन्छ। त्यसैले पहिलो पटक कोरोना संक्रमण भएर भ्याक्सिन लगाएको व्यक्ति छ भने ती व्यक्तिमा न्युक्लियोक्याप्सिड एन्टिबडी हुन्छ। त्यसमा भ्याक्सिनको एन्टिबडी पनि एड गर्छ। त्यसैले कोरोना संक्रमण भइसकेको ६ महिना भित्रका व्यक्तिले खोपको पहिलो मात्रा वा दुवै मात्रा लगाएका व्यक्तिले प्लाज्मा दिन सक्छन्।
संक्रमण भएको ६ महिनापछि किन प्लाज्मा दिन मिल्दैन भने ६ महिना पछि विस्तारै एन्टिबडी खराब हुँदै जान्छ। कोरोना संक्रमण भएको ६ महिनापछि भने प्लाज्मा दिन मिल्दैन। भ्याक्सिन नलगाएका तर कोरोना संक्रमण भएकाले ३ महिनाभित्रमा दिन मिल्छ।